Diyaarado dagaal oo weerar culus ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidanka Al-shabaab – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Diyaarado dagaal oo weerar culus ku qaaday saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidanka Al-shabaab
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helaayaa diyaarado dagaal ah oo sida la sheegay loo maleynayo in laga leeyahay dalka Maraykanka ay duqeyn xoogan u geysteen saldhigyo ay Xarakada Al-shabaab ku leeyihiin deegaanka Ceel-cadde ee gobolka Gedo.
Diyaaradahaasi oo muddo saacado ah duqeynayay saldhigyadda Al-shabaab ee deegaanka Ceel-cadde, ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay qasaare aad u xoogan, inkastoo aan si rasmi ah loo ogayn inta uu qasaarahaasi gaarsiisan yahay.
Ciidanka Xarakada Al-shabaab ayaa saldhigyadda ay kaga sugan yihiin deegaanka Ceel-cadde waxay kala wareegeen ciidanka militeriga Kenya, kadib markii horaantii sanadkaan ay weerar xoogan oo qasaare geystay ku qaadeen.
Mid ka mid ah dadka deegaanka oo diiday in magaciisa loo adeegsado warbaahinta ayaa sheegay in gantaalo badan lagu garaacay xarumaha ay Al-shabaab kaga sugan yihiin deegaanka Ceel-cadde ee gobolka Gedo.
Wuxuu sheegay inta uusan dhicin weerarka kahor ay maqleen guuxa diyaaradaha oo bixinaya iftiin aad u xoogan kadibne ay xigeen gantaalada lagu garaacay xarumaha ay ciidanka Al-shabaab kaga sugnaayeen deegaanka Ceel-cadde.
“Waxaan marka hore maqalnay guuxo diyaarado oo iftiin bixinaya, kadibne waxaa xigay gantaalada lagu garaacay saldhigyada ay ku sugnaayeen Al-shabaab, waxaa maanta deegaanka laga hadal haayaa in ciidankii Al-shabaab ee ku sugnaa saldhigyadaasi aanay waxba ka bad-baadin, oo ay dhamaantood ku dhinteen duqeyntaasi” Sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah dadka deegaanka oo diiday inaa magaciisa u adeegsano warbaahinta.
Dhinaca kale, ma jirto warar madax banaan oo xaqiijinaya tirada qasaaraha rasmiga ah oo ay ciidanka Al-shabaab kala kulmeen duqeymihii diyaaradaha dagaal ee xalay ay ku qaadeen saldhigyadda ay kaga sugnaayeen deegaanka Ceel-cadde ee gobolka Gedo.
Si kastaba ha ahaatee, bilaawgii sanadkaan ayay ahayd markii ciidamada Al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen saldhigyo ay ciidanka Kenya kaga sugnaayeen deegaanka Ceel-cadde ee gobolka Gedo, waxaana ciidankaasi Kenya weerarkaasi kasoo gaaray qasaare taariiq ah oo ay kaga dhinteen in ka badan 1,000 askar.